राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनकाे उम्मेदवारी, को हुन् राजेन्द्र लिङ्देन ? | दर्पण दैनिक
राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनकाे उम्मेदवारी, को हुन् राजेन्द्र लिङ्देन ?
प्रकाशित मिति: २०७८ मंसिर ९ गते १२:११
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री एवं सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । दरबारमार्गस्थित एक होटलमा विहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर लिङदेनलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने घोषणा अर्का नेता धवल शमशेर राणाले सार्वजनिक गरेका हुन् । अब महाधिवेशनमा लिङ्देनले अध्यक्षका लागि वर्तमान अध्यक्ष कमल थापासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
नेपालगञ्जमा मेयरसमेत रहेका राप्रपा नेता धवलशमशेर जबराको साथ पाएर लिङ्देनले राप्रपा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । यसअघि जबरा पनि अध्यक्षमा लड्ने चर्चा थियो । तर, उनले लिङदेनलाई साथ दिने भएपछि अब कमल थापालाई राप्रपाको अध्यक्षमा निरन्तरता भारी पर्ने देखिएको छ । राप्रपाको महाधिवेशन मंसिर १५,१६ र १७ गते काठमाडौंमा हुँदैछ ।
को हुन् राजेन्द्र लिङ्देन
ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँघुमा माता धनकुमारी मावों तथा पिता मानप्रसाद लिङ्देनको जेष्ठ पुत्रका रूपमा २०२२ साल असोज २२ गते जन्मिएका राजेन्द्र लिङ्देन २०३२ सालमा बसाइँसराइसगैं झापा जिल्लाको गोलधापमा स्थायी बसोबास गरेका थिए । उनको जन्मस्थल एमालेका दिवंगत महासचिव मदन भण्डारीकै जन्मगाउँ हो। प्रहरी सेवामा रहेका बाबुको जागिर झापामा भएकाले ढुङ्गेसाँघु (ताप्लेजुङ) मा जन्मेपनि उनको बाल्यकाल भने झापाको हल्दिबारी गाउँपालिका १ मा बित्यो।
०४६ को परिवर्तनपछि गठित राप्रपा राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर भएपनि आफ्नो गाउँमा भने उनी लोकप्रिय थिए। त्यसैले २०४८ र २०५४ दुवै समयका स्थानीय निर्वाचनमा लिङ्देन राप्रपाको उम्मेदवारका रूपमा गोलधाप गाबिस वडा नं. ३ मा लगातार वडाअध्यक्ष पदमा विजयी भए। माओबादी दन्द्वकालमा माओबादीले बम बिस्फोट गराई घर आगजनीसमेत गरिदिएका थिए । त्यसपछि उनी झापाकै बिर्तामोडमा बसोबास गर्न पुगेका थिए। पछि माओबादी द्वन्द्वकाल सकिएपछि पुनः गोलधापमै बसोबास गदै आएका छन् ।
झापा क्षेत्र नं. ३ बाट नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हराउँदै उनी सांसद बनेका हुन्। २०७४ सालको चुनावपछि प्रतिनिधि सभाका १ सय ७५ जना सदस्यले संसद् सचिवालयले तयार पारेको एकै बेहोराको शपथमा हस्ताक्षर गरे। राप्रपाबाट निर्वाचित एक मात्र सदस्य राजेन्द्र लिङ्देन (झापा) ले पनि त्यही बेहोराको शपथ खाए। तर उनले त्यो शपथ सकिएलगत्तै अर्को पनि शपथ खाए। यो शपथको बेहोराचाहिँ उनी आफैंले लेखेका थिए। जसमा लिङ्देनले ‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानुसरह भएको’ उल्लेख गर्दै ‘यस्तो अपराध आफ्ना तर्फबाट नहुने’ प्रतिज्ञा गरेका थिए। उनी टुप्पाबाट पलाएको वा कसैको आशिर्वादले नेता भएका ब्यक्ति होइनन् सानो उमेरदेखि राजनीतिमा संघर्षरत ब्यक्ति हुन्।